अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको आज जन्मदिन,कती वर्षकी पुगिन त मानन्धर? – ramechhapkhabar.com
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको आज जन्मदिन,कती वर्षकी पुगिन त मानन्धर?
नायिका करिश्मा मानन्धरको आज जन्मदिन । १९७२ फेब्रुअरी ४ तारिखका दिन उनको जन्म भएको थियो । यस आधारमा आज उनी आफ्नो ४९ औं जन्मदिन मनाउँदैछिन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा करिश्मालाई सदाबहार नायिकाको रूपमा चिन्ने गरिन्छ । २०४२ सालमा बनेको ‘सन्तान’ चलचित्रबाट करिश्माले आफ्नो चलचित्र करियर सुरु गरेकी हुन् ।
त्यसबेला उनी १६ वर्षकी मात्र थिइन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा साढे तीन दशक बिताउँदा पनि करिश्माको लोकप्रियतामा कुनै कमी आएको छैन । उनले खेलेका दर्जनौं चलचित्र सुपरहिट भएका छन् । चलचित्र खेल्दाखेल्दै निर्माणमा समेत हात हालेकी करिश्मा १० वर्ष अमेरिका भासिइन् । आफूले बनाएको ‘जिद्दी’ र ‘बाबुसाहेब’ चलचित्र फ्लप भएपछि उनी विरक्त हुँदै अमेरिका गएकी थिइन् ।
अमेरिका १० वर्ष बसेर फर्केपछि उनले फेरि अभिनय र चलचित्र निर्माण थालिन् । केही समय राजनीतिमा समेत होमिएकी करिश्मा अहिले नयाँ चलचित्र निर्माणमा जुटेकी छन् । उनले बनाउने तयारी गरेको चलचित्र ‘बनवास’ हो । यो चलचित्रमा उनले आफ्नी छोरि कविता मानन्धरलाई नै मुख्य भुमिकामा अभिनय गराउदैछिन् । कविताले डेब्यु गरेको शिव श्रेष्ठको फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ले फ्लप खाएपछि करिष्माले बनवासको तयारी थालेकी हुन् ।